Etu esi enweta akara mmeri na E-Azụmaahịa Egwuregwu | Martech Zone
Etu esi egwu Ebumnobi mmeri na E-Commerce Game
Ọ bụ ezie na World Cup enwere ike naanị otu onye mmeri, ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe ọganiihu n'egwuregwu e-Azụmaahịa. Enwere usoro esi enyere aka ndị na-ere ahịa akara. Ntụaka na-egosi gị otu esi egwu ndị egwuregwu kachasị mma yana mepụta atụmatụ egwuregwu dị egwu ka azụmahịa e-Commerce gị wee weta mmeri.
Tupu oge ahụ amalite, ndị otu ga-ebu ụzọ tinye ego na ndị egwuregwu kachasị elu. Abịa na azụmahịa e-Azụmaahịa 5 n’ime ego iri na-ama ama dị oke mkpa na azụmaahịa. 10% nke ndị ahịa na-etinye ego na azụmaahịa search engine na nnweta ndị ahịa, 56% na njide ndị ahịa, 51% na peeji nke kachasị mma, yana 48% na SEO. Na infographic n'okpuru, Ntụaka na-ewetara data sitere na 14th Annual Merchant Survey, nke na-egosi ebe ndị ahịa na-etinye ego, otu ha si achọpụta mgbanwe na mkpa nke onye na-azụ ahịa, yana atụmatụ dị iche iche na-enye ROIs kachasị.
Tags: na-ere ahịae-azụmahịaahia ecommerceekwenti e-commerceROIiko ụwa 2014
Wzọ Uzo 5 Dị Nso Dị na Ahịa Ga-emetụta Purzụ Azụ Ahịa
Jul 21, 2014 na 3: 38 AM
Amaara m ọtụtụ ihe ọhụrụ maka saịtị e-commerce ma amata m na nke a ga-enyere m aka nke ukwuu. Enwere m mmasị na ngosipụta nke ihe ọmụma ebe a ma na-arụ ọrụ na otu.